पलकाण्ड : किन केकीलाई थु’क्न मन लाग्यो ? – Nep Stok
फागुण १६, २०७८ सोमबार 463
किशोरीमाथि कर णी गरेको भन्दै पल शाहविरुद्ध अहिले तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र नवलपुरमा समेत दुईवटा जाहेरी दर्ता भएका छन् । तनहुँ प्रहरीले पललाई पक्राउ गरिसकेको छ । यो प्रकरणले अहिले सामाजिक सञ्जाल त’रंगित बनिरहेको छ । यस घटनाका बारेमा अनेकन गशिपहरु बनिरहेका छन् ।
केही दिनअघि ती किशोरीलाई आफ्नै साथी दुर्गेश थापा, सरोज ओली, कृष्ण जोशीलगायतका व्यक्तिहरुले उचालेर आफूविरुद्ध जाहेरी दिन लगाएको पल शाहले अडियोसहित फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । ती किशोरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न लगाउने कार्यमा आफ्नै मित्रहरुको उ’क्साहट रहेको शाहले आरोप लगाएका थिए ।
यसै क्रममा नायिका तथा निमात्री केकी अधिकारीले फेसबुकमा हुने ‘जजमेन्ट’ लाई व्यंग्य गरेकी छन्।
उनले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘ कहिलेकाही त्यसै त्यसै थ’कित लाग्ने। त्यसै दिक्क लाग्ने। नानाथरी सोच आउने। अनि ‘थु’क्क’ थु’क्न मन लाग्ने । त्यसको गल्ती भन्यो थु’क्क लाग्ने! यस्को गल्ती भन्यो थु’क्क लाग्ने। आफ्नै कयौं गल्ती नदेख्दा पनि थु’क्क लाग्ने। देख्दा झनै थु’क्क लाग्ने। दोष त यही थु’क कै हो कि जस्तो लाग्ने!! यो थु’क हुन्थेन भने कसैलाई थु’किन्न होला!! स’रा’पिन्न होला !! कसैको बिजोगमा रमाइन्न होला !
कुनै दिन थु’क्दा थु’क्दै थु’क नै सकिएला अनि के गर्ने होलार? यस्तै सोच्दा सोच्दै फेरि थु’क्क लाग्ने। त्यस्सै दि’क्क लाग्ने । अनि थ’कित लाग्ने।’
केकीले लेखेको स्टेटस पल शाहमाथि परेको नाबालक किशोरीको कर णी आरोपसँग मिलेको जस्तो लाग्छ ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा यो विषयलाई लिएर भइरहेको टि’काटि’प्पणी र मानिसले एक अर्कालाई लगाएको आ’रोप प्र’त्यारो’पलाई व्यंग्य गरेको बुझिन्छ। उनले लेखेको थु’क ‘नकारात्मक विचार’ मान्ने हो भने उनी अहिले भईरहेको ‘पलकाण्ड’ को छलफलले थकित भएकी छन्।
यहि आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका नायक पल शाहका समर्थकले काठमाडौंको अनामनगरमा विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेका छन्।पलले आफूविरुद्ध षडयन्त्र भयो भनेर सार्वजनिक भएका सामग्री राखेपछि समर्थकले उनको पक्षमा र्‍याली निकाल्ने तयारी गरेका हुन्।
आफूविरुद्ध उजुरी परेको चौथो दिन अभिनेता पल शाह तनहुँ प्रहरीमा पुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा आफूविरुद्ध जाहेरी परेको चौथो दिन आइतबार आ’त्मस’मर्पण गर्न पुगेका पललाई जिल्ला अदालतले सात दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न आदेश दियो।
Prevभोली पनि नेपाल बन्दको घोषणा,सार्वजनिक भयो अहिलेसम्मकै कडा विज्ञप्ती
Nextपल शाहलाई सम्झिँदै ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ का निर्देशकले लेखे भावुक स्टाटस